Fanenana ny taha-pahafatesan’ny reny sy ny zaza : Nomena fitaovana ireo dokotera miasa any ambanivohitra -
AccueilSosialyFanenana ny taha-pahafatesan’ny reny sy ny zaza : Nomena fitaovana ireo dokotera miasa any ambanivohitra
Fanenana ny taha-pahafatesan’ny reny sy ny zaza : Nomena fitaovana ireo dokotera miasa any ambanivohitra
21/03/2017 admintriatra Sosialy 0
Isan’ny toerana tena ahitana taha-pahafatesan’ny reny sy ny zaza ambony indrindra ny tontolo ambanivohitra, noho izy ireo, tsy tia manantona ny hopitaly rehefa hiteraka. Antony mahatonga izany, araka ny vaovao voaray ny tsy fandriam-pahalemana, hany ka tsy mety hiala amin’ny toerana misy azy ireo olona fa aleon’ny miaritra ka tonga hatrany amin’ny fahafatesana izany. Manoloana izay indrindra, niara-niasa ny “Fondation Orange” amin’ny alalan’ny “Orange Solidarité Madagascar” sy ny fikambanana “Solidarité international marseillaise” « Santé Sud » tamin’ny fametrahana ny tetikasa fanamafisana ny kalitao amin’ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy bevohoka sy miteraka eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Tetikasa entina indrindra hanatsarana izay fandraisana an-tanana ireo vehivavy bevohoka izay.
Ary mba hanatrarana ny tanjona, dokotera miasa tena miisa 50 ao anatin’ny “Santé Sud” nomena fiofanana naharitra 5 andro, teny Centre Anyma, niaraka tamin’ny minisiteran’ny Fahasalamana. Taorian’ny fiofanana, notoloran’ny “Orange Solidarité Madagascar” fitaovana manaraka ny fenitra entina hanatsarana indrindra izany fandraisana an-tanana ireo vehivavy mitondra vohoka any amin’ny tontolo ambanivohitra ireo mpiofana. Fitaovana toa ny fandriana fampiterahana, “Ventouse”, “insulfflateur” hisarihana ny fofon’aina ho an’ny zaza sy ny reniny, “Aspirateur” ary “Kit manuel intra-uterine”. “Ankoatra ny fiofanana, mbola nahazo fitaovana hanampy ny fanafody ampiasaina ireo dokotera ny “Santé Sud”. Amin’ny alalan’ity fitaovana ity dia antenaina mba hisy fiantraikany amin’ny fihenan’ny taha-pahafatesan’ny reny mitondra vohoka sy zaza vao teraka”, hoy ny tompon’andraikitra ao amin’ny “Santé Sud”, Razakarison Clément. “Tanjona ny hanomezana ireo vehivavy bevohoka fitsaboana feno sy ara-kalitao, miaraka amin’ny mpitsabo manana ny kalitao”, hoy kosa indray, Randriambeloma Josie, filohan’ny “Orange Solidarité Madagascar”.
Fa ankoatra ny fanenana ny taha-pahafatesan’ny reny sy ny zaza, misoroka ny aretina mamany lava ihany koa ny fisian’ity fitaovana ity. Manamaivana koa ireo hopitaly lehibe sy ny fiainan’ny olona any ambanivohitra ny fisian’ireo fitaovana ireo satria tsy hisy intsony ny olona alefa any amin’ny tobim-pahasalamana, araka ny vaovao hatrany. Marihina fa miparitaka any amin’ny faritra fito (Analamanga, Itasy, Bongolava, Atsimo Andrefana, Boeny, ary Sofia) eto Madagasikara ireo dokotera 50 ao amin’ny “Santé Sud” ireo. Miasa tena izy ireo fa tsy mpiasam-panjakana ary any amin’ny toerana lavitra ny CSBII no hiasan’izy ireo.